Ungayixazulula kanjani i-google captcha ngokuzenzakalela ngeReBreakCaptcha | Kusuka kuLinux
Impi yokulwa nama-bots abhekene nokuhlasela izingosi zogaxekile nokuzama ukunqanda ukuphepha kwekhasi ngalinye lewebhu sekunzima isikhathi eside. Elinye lamathuluzi asetshenziswe kakhulu ukuzama ukulwa nalaba bantu abangenayo abacasulayo yilezi i-google captcha, ikakhulukazi inguqulo ReCaptcha V2, pero lamentablemente se ha difundido una vulnerabilidad en esta herramienta que permite resolver las captcha de manera automática.
I-athikili elandelayo yemfundo izosivumela ukuthi sephule ukuphepha kwe- I-ReCaptcha V2, sisebenzisa ithuba lokulalelwayo elikunikezayo. Lo mbhalo uphefumulelwe yi ukungena okulandelayo, lapho kuchazwa khona ukuba sengozini ngokuningiliziwe futhi kunikezwa iskripthi esivumela ukuthi sixazulule ama-captcha ngokuzenzakalela.
1 Yini iReBreakCaptcha?
2 Faka futhi ulungiselele i-ReBreakCaptcha
3 Iziphetho ngeReBreakCaptcha
Kuyinto isicelo samahhala esisebenzisa ukuba sengozini kwe- I-ReCaptcha V2, ukuze sombulula i-captcha ngokuzenzakalela, kulokhu sebenzisa umtapo wezincwadi selenium, lo Ukuqashelwa kwenkulumo ye-Google Api kanye nama-algorithms ahlukahlukene.
Ithuluzi lilula, lidlula ngezigaba ezintathu, elokuqala lapho lixazulula khona i-captcha ethandwayo ye- «Angisiye irobhothi«, Bese kuthi lapho i-captcha ezoxazululwa iphuma, khetha inketho yomsindo, thola umsindo bese uyicubungula nge- Ukuqashelwa kwenkulumo ye-Google ApiEkugcineni, faka izinombolo ezaziwa yi-Api bese uzifaka enkambu ye-captcha.
I-Google Speech Recognition Api ingahluleka ngokuphindaphindiwe, ngakho-ke YeniCreakUzama izindlela ezahlukahlukene uze uthole isixazululo esifanele.
Faka futhi ulungiselele i-ReBreakCaptcha
Ukuze usebenzise i- YeniCreak Kufanele silandele izinyathelo ezimbalwa ezincane, ngoba iskripthi sokuqala sinezimpawu zeWindows.
Okokuqala, kufanele sifake ukuncika okudingekayo ukuze iskripthi sisebenze:
Okulandelayo kufanele sihlanganise indawo yokugcina iskripthi:
Siya kudeskithophu ebunjiwe bese sihlela isigaba, ngezindlela ezihambisanayo zeLinux.
Kufanele bashintshe imininingwane elandelayo
Ngendlela efanayo uma usebenzisa i-python3, ngicela ungene esikhundleni xrange por range. Kufanele futhi siguqule i-URL lapho sifuna ukusebenzisa khona iskripthi (Lokho wukuthi, leyo esifuna ukuthi iSkripthi siyixazulule).
Singakwenza kulayini lapho kuvela okulandelayo:
Ekugcineni kufanele sigijime YeniCreak, izovula ngokuzenzakalela isiphequluli nge-url ekhonjisiwe futhi yenze inqubo yokuxazulula i-captcha okukhulunywa ngayo.
Lo mbhalo ungaba isisekelo sokuwusebenzisa kuzinqubo ezahlukahlukene naku-python ngezinyathelo ezilula esingawuthuthukisa. Ukusetshenziswa kwaleli thuluzi kumele kusetshenziselwe ukufundisa, futhi nomphakathi wonkana kubalulekile ukuwusabalalisa njengoba uqinisekisa ukuthi kungekudala sizoba nesichibi esixazulula lokhu kuba sengozini.
Ukuba sengozini kuyasebenza kuze kube manje, ngakho-ke kunconywa ukuthi abasebenzisi abasebenzisa I-ReCaptcha V2 gcwalisa ukuphepha kwakho ngamanye amathuluzi, ikakhulukazi ukutholwa kwe-IP okuzama kaningi ukuxazulula ama-captcha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayixazulula kanjani i-google captcha ngokuzenzakalela ngeReBreakCaptcha
Ungayisebenzisa njengoba ivela endaweni yokugcina izinto
Siyabonga ngokwabelana, yize ngifunde umucu wokuqala ku https://east-ee.com/ Akubonakali sengathi izinga lokushaya liyaphawuleka, kepha abasebenzisi abaningi baveza ukuthi likwazi kuphela ukuxazulula ama-captchas alula kakhulu kuma-ratios asevele ephansi.
Ngempela, amanani okushaya aphansi (Ekuvivinyweni engikwenzayo 1 kokungu-7 kwaxazululwa), noma kunjalo, ubungozi bukhona futhi kungenzeka ukuthi ithuluzi lizothuthukiswa ukuze la ma-hit ratios akhuphuke.
Ngiyabonga ngalo mbhalo, iqiniso ukuthi kungisize kakhulu!
mfowethu ungachaza kancane mayelana nokuthi ungayifaka kanjani emawindini?
Siyabonga ngokwabelana nesibankwa; ngqo amabhodi wokudlala ukuze udlale ngemuva kwesikhashana. Njengoba isePython, kufanele usebenzise i.
wilber antonio kusho
Ukubingelela okuhle nokubonga ngalesi sihloko, okuhle kakhulu futhi okuthakazelisayo. Ngingathanda ukungithumelela i-scrypt yamawindi, ngoba angiyitholi ndawo, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokunaka kwakho.
Phendula ku-wilber antonio
Ayixazululi i-capcha futhi ingithumelela lesi sexwayiso
I-Runtime Warning: Ayikwazanga ukuthola i-ffmpeg noma i-avconv - ihluleka ukwenza i-ffmpeg, kepha kungenzeka ingasebenzi
warn ("Ayikwazanga ukuthola i-ffmpeg noma i-avconv - ihluleka ukwenza i-ffmpeg, kepha kungenzeka ingasebenzi", RuntimeWarning
izintambo zezingelosi kusho
Sawubona ngizama ukubhalisa ekhasini kepha uma ngingena angikwazi UKUXHUMANA NE-RECAPTCHA kusho ukuthini lokhu, othile angangisiza
Phendula izintambo zezingelosi
jesus ramos kusho
Ungayixazulula kanjani i-capcha yenombolo yokwengeza, ukususa, ukubuyabuyelela
Phendula ujesu ramos
kanye nesixhumanisi sokulanda?
UJose fernandez kusho
Ngifuna isicelo se-capchat
Phendula ujose fernandez
izingane z. igquma v. kusho
Engikufunayo ukudlula noma ukuvula i-captcha, angikwazi ukudlula kubo, abavuli
Phendula ku-ana z. igquma v.
iraida quiroz kusho
Ngidinga ukuxazulula inkinga ye-RECAPTCHA futhi angazi ukuthi ngingayenza kanjani, ngicela ungisize
Phendula ku-iraida quiroz
Ungasebenzisa futhi iGoodByeCaptcha esebenzisa ukutholwa kwesithombe okugwema inkinga ye-Try Again lapho uzama ukuxazulula umsindo kaningi.
Ungazibulala kanjani izinqubo ku-Linux kalula nge-fkill-ehl